Warbixin ku saabsan sida wasiiro ku xigeenada iyo wasiiro dhowlayaasha ay beelaha u kala haleyaan. - Caasimada Online
Home Warar Warbixin ku saabsan sida wasiiro ku xigeenada iyo wasiiro dhowlayaasha ay beelaha...
Warbixin ku saabsan sida wasiiro ku xigeenada iyo wasiiro dhowlayaasha ay beelaha u kala haleyaan.
Kadib markii lagu dhawaaqay Wasiirada xukuumadda Federaalka Somalia ee uu hogaamiyo Cabdi Faarax Shirdoon isla markaasna ay noqotay mid ka yar wasiiradii horey looga bartay xukuumadihii soo maray dalka oo laga dhigay 10 wasiir oo min labo loogu qeybiyay beelaha shanta ah, ayaa haatan waxaa dagaaal culus uu ka jiraa wasiir ku xigeenada iyo wasiir dowlayaasha.
Xog aan ka helnay xafiiska Ra’iisul wasaraha iyokanMadaxweynaha ayaa sheegaysa in labada dhinac ay isla gareen waa Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha in lasoo magacaabo 10 wasir ku xigeen iyo 6 wasiir dowlayaal.
Hadaba beelaha qaar ayaa tartan adag ugu jira sidii ay beel kasto ku heli lahayd wasiir ku xigen ama wasiir dowle.
Waxaa noo suura gashay inaan helno qaar kamid ah magacyada shaqsiyaadka lala xiririnayo iyo beelaha sida ay u kala heleen wasiir ama wasiir dowle.
Beesha Gugudhabe waxay heshay Wasiir Dowlo.
Beeshan oo ka kooban beelo badan sida Beesha Gaaljecel, Beesha Baadi Cadde, Beesha Jajeele iyo beelo kale, ayaa waxaa ka dhaxeeyo hal wasiir dowlo oo la siiyay beeshaas.
Shaqsiyaad ku jira baarlamanka dowladdaSomaliaiyo kuwo kale oo siyaasiyiin ah ayaa ku tartamaya inay noqdaan ama ay helaan halkaas wasiir dowlo.
Dadka magacyadooda aan si xog hoose ku helnay ayaa waxaa kamdi ah.
1- Dr Maxamed Cali Ibraahin oo u dhashtay beesha Baadi Cadde. Waxa ay isku dhow yihiin Dr CUmar Iiman Abuu Bakar oo horey u ahaa Hogaamiyaha xisbul islaam, wuxuu kaloo ninkaan soo noqday wasiirka Dhaqan celinta maleeshiyaadka, xukuumaddii Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke.
Waxa kale oo uu horey ugu tirsanaan jiray Maxaakiimtii islaamiga isagoo mar hogaaminayay wafdigii Maxaakiimta ee magaalada Khartuum ee dalka Sudan wada hadalada kula yeelanayay dowladdii KMG ay sida weyn xilligaas isaga soo horjeedeen, waana nin ka mid ah xubanaha baarlamanka waana ninka ugu dhow in laga dhigo wasiir dowladaha ay heleyso beesha Gugudhabe. Waxa kale oo ay si aad ah isugu dhow yihiin Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamud.
2 – Qofka labaad ee besha gugudhabe waa Ibraahin Cali Xuseen oo kamid ahaa musharaxiintii xilka madaxweyne, laakin aan saamayn ku yeelan. Waxa uu iska kasoo jeeda beesha Jajeele ee ka tirsan beel weynta Gugudhabe.
3 – Qofkan waa haweeney lagu magacaabo Caaliya Sheekh Xasan Cismaan, gabadhana waxay kasoo jeeda beesha Baadi Cadde ma ahan qof sidaas loo yaqanno.
4 – Nin magaciisa lagu soo koobay Xaaji San yare oo kasoo jeeda beesha Jajeele, waxaana uu kamid yahay xildhibaanada cusub ee dowladdaSomalia, waa qof ku cusub siyaasaddaSomalia.
5 – Daahir Amiin Jeesoow, waxaa uu horey ugu tirsanaa xildhibaanadii dowladdii hore, sidoo kale wuxu ka tirsan yahay xildhibaanada cusub wuxuuna u dhashtay beesha Gaaljecel.
Dhamaan shantaan qof aan kor kusoo sheegnay waxay wada raadinayaan halka wasiir dowle ay beesha Gugudhabe heshay, qofka ugu dhow ee an xogta ku helnay waa Dr Maxamed Cali Ibraahin.
Beesha Murusade waxay heshay wasiir ku xigeen.
Beeshaan waxay horey ugu hanqal taagaysay inay hesho wasiirka 2-aad ee beesha Hawiye ay heleysay, laakin waa ay ku fashilantay kadib markii Beesha Xawaadle oo abtiyaal u ah madaxweyne Xasan Sheikh ay heshay wasiirka 2-aad ee beel weynta Hawiye.
Beeshaan waxaa ilaa haatan aan xog ku helnay in ay heshay wasiir ku xigeen waxaana ay ku tartamayso labo nin oo lagu kala magacaabo Maxamed Nuur Gacal iyo Cawil Maxamed Xuseen oo ku magac dheer Meeri.
Maxamed Nuur gacal ayaa horey loo hadal haayay inuu helaayo mid kamid ah wasiirada laakin kadib markii ay weeysay beeshisa wasiirkaas ayaa waxaa haatan lala xiriirinayaa inuu qabto xilka wasiir ku xigeen ay beeshiisa heleyso.
Mr Gacal ayaa madax ka ah Hay’adda ORC wuxuna u dhashtay beesha murusade gaar ahaan jufada reer cabdala.
Sidoo kale waxaa xilka wasiir ku xigeen ee beesha Murusade tartan ugu jira nin magaciisa lagu sheegay Cawil Maxamed Xuseen Meeri kaas oo isna kasoo jeeda Jufada Habar ceyn ee beesha Murusade ma ahan nin inbadan laga yaqaanno.
Beesha Dirta Koofureed. Waxay heshay wasiir ku xigeen.
Beeshaan ayaa ka kooban jufooyin badan waxayna ku dagalamayaan wasiir ku xigeen la sheegay inay heshay beeshaas.
Hadaba shaqsiyaadka lala xiriirinaayo ayaa kala ah kuwaan hoos ku qoran.
C/laahi Xaaji Abuukar oo loo yaqaan C/laahi Carab.
C/naasir Gaarane oo ka tirsan Barlamanka cusub.
Calas Maxamed Faarax oo Dirta koofureed ah gaar ahaan jufada Qubeys.
Axmed Xasan Aadan oo kamid ah ninka leh isbitaalka Daaru SHiffa oo inta badan ciidamada dowladda lagu daaweeyo oo ku yaalla wadada Maka Al Mukarama sidoo kale ahaa wasiir dowlaha wasaaradda kalluumaysiga Kheyraadka badda xukuumaddii C/wali Gaas.
Intaas waxay ku tartamayaan wasiir ku xigeenka ay beesha DIrta Koofureed ay heshay.
Beesha Warsangali Daarood waxay heshay wasiir ku xigeen.
Dadka ku loolamaya wasiir ku xigeenka beesha Warsan gali daarood oo kamid ah beel weynta Daarood ayaa waxa kamid ah.
1-Daahir Xaaji Maxamuud Geelle oo ahaa wasiir ku xigeenkii wasaaradda shaqada,shaqaalaha,isboortiga iyo dhalinyarada xukuumaddii C/wali Gaas wuxuuna haatan ka tirsan yahay xildhibanada cusub.
2-Saciid Jaamac Qorsheel,oo ahaa wasiir dowlihii wasaaradda Gaadiidka cirka bada iyo dhulka xukuumaddii C/wali gaas,sidoo kale horey u soo noqday safiirkii Dalka Gabon ahaana kabtankii hore ee xulka Baaskitka Somalia iyo kooxdii LLPP Jeenyo waxaana dhalay Taliyihii hore ciidanka Booliska Somalia General Jaamac Qoorshee.
3-Caashi Axmed Cabdala ayaa kamid ah dadka lala xiriirinayo wasir ku xigeenka beesha warsan gali ay ka heleyso xukuumadda Dr Saacid.
Beesha Dhulbahante waxay heshay Wasiir Dowle.
Beeshan oo kamid ah beelihii wasiir aan ka weyn jirin dowladihii soo maray dalka 40-kii sanno ee lasoo dhaafay ayaa haatan ku dagaalamaya wasiir dowle la sheegay inay beeshas ka heshay xukuumadda Dr Saacid.
Dadka tartanka ugu jira wasiir dowlaha ay heshay beesha dhulbahante waxaa kamid ah.
Siyaad Maxamuud Shire oo ka tirsan xildhibaanada cusub ee dowladdaSomaliahoreyna ugu shaqeen jiray xafiiska Ra’iisul wasaarihi hore Somalia Prof.Cali Maxamed Geeddi.
Ugaas C/laahi Ciise nin magaciisa lagu sheegay kaas oo horey ugu tirsanaa jiray ciidanka nabad sugiidda Somalia NSS-ta Dowladdii kacaanka wuxuna ka gaaray heer kabtan isagoo ka howl gali jiray Gobolada dhexe wuxuna 20-kii sanno ee burburka dalka uuk u noola qurbaha.
Beesha Digil iyo Mirifle.wasiir ku xigeen.
Waxaa noo suura gashay inaan helno wasiir ku xigeen ay beesha Digil iyo Mirifle heshay iyadoo beeshaan ay helayso wasiir ku xigeen ama wasiir dowle kale hadana waxaa noo suura gashay inaan helno wasiir ku xigeen.
Waxa ku tartamaya jagadaas dad badan laakin waxa ka helnay magacyada ragaan hoos ku qoran.
Maxamed Keyroow Maxamed Yuusuf waa xildhibaan ka tirsan baarlamanka cusub wuxuu kasoo jeeda jufada Hariin waxay isku jufo yihiin Siyaasigii hore Shaati Gaduud waana ninka ay u badan tahay inuu helo mid kamid ah xilka Wasiir ku xigeenka beesha digil iyo mirifle.
Sidoo kale wuxuu tartan kala kulmaa nin magaciisa lagu sheegay Dr C/laahi Maxamed Muuse oo ku magac dheer Shiilo.
Sidoo kale waxaa xilkaas doonaya Dr Maxamuud Aqii oo u dhashtay beesha Garre waxaa uu mar kasoo qabtay xukuumadihii kmg wasiir dowlaha Caafimaadka isna waa shaqsi kale oo u hanqal taagaya inuu hello booskaas.
Sidoo kale waxaa jira magacyo kale iyo xilal kale oo wali aanan helin laakin aan idin soo gudbin doonno dhawaan insha alaah.
FG: Xogtan, waxaa suurta gal ah inay wax iska beddelaan, sida marar badanba dhacday, laakiin sidan ayay u badan tahay.